thinzar's blog: Myanmar Embassy (Malaysia)
Labels: general, places in Malaysia
Myanmar Embassy (Malaysia)
သံရုံးမကြာခန (လေးနှစ်အတွင်းမှာ လေးခါ) ပြောင်းနေတော့ ဒီတစ်ခေါက်ရောက်တုန်း လိပ်စာနဲ့ ဖုန်းနံပါတ် မှတ်လာလိုက်တယ်။ လိုအပ်ရင် ပြန်ရှာရလဲ လွယ်အောင် တခြားသူတွေလည်း လိုချင်ရင် အလွယ်တကူ ဆက်သွယ်နိုင်အောင် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ IT ခေတ်ဆိုတော့ ဂူဂယ်လ်မှာ ရှာခဲ့ရင် updated information ရတာပေါ့။ မလေးရှားမှာ နေနေသမျှ သံရုံးနဲ့ မကင်းကြတဲ့ သူတွေဘဲ မဟုတ်လား။ :) (သံရုံးရှေ့မှာ ချထားတဲ့ စာရွက် အပိုင်းလေးတွေကနေ ကူးလာတာပါ။ ဖုန်းတွေ အလုပ်လုပ်သလား မလုပ်ဘူးလားဆိုတာ ကျမလဲ မသိကြောင်းပါ။ နံပါတ်တွေတော့ အများကြီးဘဲ။)
8 C, Jalan Ampang Hilir
55000, Kuala Lumpur
Phone: 03 4251 4455
03 4251 6355
03 4251 6455
03 4251 5595
Fax: 03 4251 3855
Putra LRT ရထားနဲ့လာရင် Ampang Park မှတ်တိုင်မှာ ဆင်းပြီး ဘတ်စ်ကားစောင့်ပါ။ ကားနံပါတ် ၂၈၊ ၇၈၊ ၇၉ တို့ကို နှစ်မှတ်တိုင်စီးပြီး Sucasa မှတ်တိုင်မှာဆင်းပါ။ (ကေအယ်လ်ထဲကနေ ဘတ်စ်ကားစီးပြီး လာမယ်ဆိုရင် ၂၈၊ ၇၈၊ ၇၉ ကားတွေကို Kota Raya ကနေစီးလို့ ရပါတယ်။) ကုန်းကျော်တံတားကို ဖြတ်ပြီးရင် တည့်တည့်ဆက်သွားပြီး မီးပွိုင့်ရောက်ရင် ညာချိုးပါ။ နည်းနည်းဆက်သွားပြီးလို့ လမ်းအဝိုင်းပါတ် တွေ့ရင် ဘယ်ဘက်ချိုးလိုက်ရင် ရောက်ပါပြီကွယ်။ အနီးစပ်ဆုံး မြေပုံတော့ ဒီမှာ သွားကြည့်ပါ။ Lanson Place နားမှာ ကွေ့ပြီး Ampang Hilir ထဲကို ဝင်ရပါမယ်။
အမှန်တော့ ပါတ်စ်ပို့သက်တမ်းတိုးရင် ဘာတွေလိုတယ်။ အခွန်ဆောင်မယ်ဆို ဘာတွေလိုတယ်။ အခွန်နှုန်း တွေပါ မှတ်ထားချင်တာ။ လူတွေ အရမ်း ရှုပ်နေလို့ မမှတ်ခဲ့ရဘူး။ website တစ်ခုနဲ့ အမြဲ update လုပ်ပေးနေရင် ကောင်းမယ်။ မဟုတ်ရင် တစ်ခါသွားလိုက် ပြန်လာလိုက် ပြန်သွားလိုက်ဆို မလွယ်ဘူး။
ကျေးဇူး အမ ကျောင်းတက်ကြောင်း ထောက်ခံစာယူဖို့ဟာ မသွားတတ်လို့ အခုထိ မရောက်သေးဘူး ( ပျင်းတာလည်း ပါပါတယ် ) ...
11/10/08 7:27 PM
သီတင်းကျွတ်ပြီးနော် ဘယ်တော့စားရမလဲပျော်ရွှင်သောသီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့လေးဖြစ်ပါစေ နော် တတ်ခ်ထားတာလေးလဲအကြွေးဆပ်ပါဦး
Htoo Tay Zar said...
မလေးကို အလည်သွားချင်တယ် နော်မှသွားတော့မယ် အမ.. ဒါနဲ့ အမ မြန်မာပြန်ရောက်နေပြီလား မုန့်လိုက်ကျွေးမယ်လေ အမ ကျွန်တော်တို့ ဘက်မှာ စားသောက်ဆိုင် ကောင်းကောင်းတွေရှိတယ်..
16/10/08 12:03 PM
it is not comment but comment..u dont need to post it..very good post!! But u know it has been moved to that place more than 1yr ago. I was confuse after reading ur blog.. then i find out that the place is same...huhu...
17/10/08 11:39 AM
Very good!! But other information about tax and so on it depends on visa...EP and WP are different charges for tax and also they have categorize according to the classification...Eg. Construction worker, general worker, work in restraunt, Doctor, Professional and so on..They charge tax based on that works...normally ranging from RM50 to RM200 per month depends on Visa...
But for generally renewing passport charge is only 600 and take few hours only...
But those who wanna apply for new passport after 10years it charge RM1200 and take minimun of 2weeks to one month..
17/10/08 11:47 AM
thank q so much
21/10/08 11:45 AM
ပတ်စ်ပိုသက်တန်းတိုးတာ petronas က လုပ်ပေးတယ်..
ကျွန်တော် ရောက်သွားတုန်းက ဘေးနားမှာဘန်ကလိုလေးအိမ်တလုံးရယ် မြေကွက်တခုပေါ်မှာ ဖြစ်သလိုလုပ်ထားတဲ့ ကွန်းယာဆိုင်အလား အောင်းမေ့ရတဲ့ စာရွက်စာတမ်းလုပ်တဲ့နေရာလေးပဲရှိတယ်။
2/11/08 2:26 AM
မတွေ့တာကြာလို့ အစ်မရေ။ နေကောင်းလား။ သတိရနေလို့။ မြန်မာပြည်ပြန်တာကော ဘယ်လိုနေလဲ။ ပျော်ခဲ့လား။ ပျော်မှာပေါ့နော်။ တော်တော်စားခဲ့လားလို့ အဲလိုမေးတာ :P :P .
2/11/08 9:38 AM
ဘယ်ချိူးညာချိူး ဘယ်မြန်ချိူးနေဲနဲ ဆက်လျောက် ဟိုဘကလေးကွေ့လိုက်ပါဦး
18/11/08 11:23 PM
သယ်ရင်းရေဘာသာပြန်လေးကောင်းတယ်ကွ ကြိုက်တယ် အဆင်ပြေပျော်ရွှင်ပါစေနော်
20/11/08 3:28 PM
ွှTrh>> မြန်မာသံရုံးကို အပျင်းပြေ အလည်သွားလည်း ရပါတယ်ကွယ်။ ရောက်ဖူးသည် ရှိတာပေါ့ :)
flowerworld>> ဟုတ်တယ်နော်။ တက်ထားတာကို မေ့နေတယ်။ တစ်လလုံး ခရီးထွက်နေရလို့လေ။
Htoo Tay Zar>> လာခဲ့လေ မလေးရှားကို။ လည်လို့ကောင်းပြီး ပစ္စည်းတွေ ဈေးလည်း သက်သာတယ်။ မြန်မာပြည်ပြန်ရောက်တုန်းက ဘလော့ဂ်ဖွင့်လို့ မရလို့ ကွန်မန့်ဖတ်တာ နောက်ကျသွားတယ်။ ကျွန်တော် ဘယ်နားနေတယ် မသိတာ နာတာဘဲ။ မုန့်မစားလိုက်ရဘူးပေါ့။ နောက်တစ်ခါ မြန်မာပြည်ပြန်မယ်ဆို ကြိုပြောမှ ဖြစ်မယ်။
Harun >>သံရုံး အသစ်ပြောင်းသွားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒါ လွန်ခဲ့ တဲ့ တစ်နှစ်လောက်ကတည်းက ပြောင်းထားတဲ့ တစ်ခုဘဲလေ။ ဒါပေမယ့် သံရုံးဆိုတာ တစ်နှစ်လောက်နေမှ လူတွေ တစ်ခေါက်ရောက်ကြတာ မဟုတ်ဘူးလေ။ အဲဒါကြောင့် သံရုံးလိပ်စာကို Google လုပ်တဲ့သူတွေအတွက် အသုံးဝင်လိုဝင်ငြား တင်လိုက်တာပါ။ Thanks for the other info :)
ဇမ်းခွါလ်>> hope it helps somehow..
ဖြိုးဝေတိုး>> ဟုတ်တယ်၊ အဲနေရာဘဲ။ မပြောင်းသေးဘူး။ =) UTP ကနေ တဝေးတလံ vote လာပေးတယ်ဆိုတော့ ချီးကျူးပါတယ်။ အစ်မရုံးက အဲဒီသံရုံးနဲ့ သိပ်မဝေးတာတောင် သွားရမှာ ပျင်းလို့ မသွားvote လိုက်ဘူး။
Winkabar >> မြန်မာပြည်ပြန်ရောက်ကတည်းကနေ ပြန်လာတဲ့အထိ ညအိပ်တဲ့ အချိန်ဘဲ ပါးစပ်ပိတ်ပြီး ကျန်တဲ့ အချိန်တွေ အဆက်မပြတ်စားနေတာ :D ကြာကြာနေရင် ဝလာဖို့ရှိတယ်။
မခင်ဦးမေ>> အစ်မ လမ်းမှားနေပါတယ်ရှင်။ :P
27/11/08 4:41 PM
မြန်မာသံရုံးတော့ ရောက်ဖူးသွားပါပြီ၊ ..... သူများတွေပြောတာ မယုံခဲ့ဘူး.. ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့တော့မှဘဲ... တကယ်ပါလားဆိုတာ သိလိုက်ရပါတယ်..."ပြောမယုံကြုံမှသိ" ဆိုသလိုပါဘဲ။ :-(
10/11/09 5:09 PM
AATO>> ဟဲ..မြန်မာလိုတွေ ဘာတွေ ရေးလို့ဘာလား.. great! ဟုတ်တယ်.. သဉ္ဖာလည်း သံရုံးကို နောက်အပါတ်သွားရဦးမယ်။ အခွန်သွားဆောင်ရမယ်။ any update at the embassy? any update on tax policy?
10/11/09 6:22 PM
သဉ္ဖာ >> ဘလောက်ကိုပစ်ထားတာ ရ လတောင်ရှိနေပြီနော.. တော်တော်အလုပ်ရှုပ်နေလား ဒါမှမဟုတ် စိတ်က တခြားနေရာ မှာပျော်မွေ့နေတာလား.. တခုခု ဒါမှမဟုတ်ရင် နှစ်ခုလုံး ဖြစ်နေတာဖြစ်ရမယ်။ ;)
26/3/10 12:13 PM
Taipei: where to go and what to eat?
Digital Fortress နှင့် နောက်ဆက်တွဲ စဉ်းစားစရာများ